Hlola iSan Francisco, Usa - World Tourism Portal
Hlola iSan Francisco, Usa
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSan Francisco, Usa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSan Francisco
Bukela ividiyo ngeSan Francisco
Hlola iSan Francisco idolobha elikhulu eCalifornia, indawo ephakathi neBay Area, eyaziwa kakhulu ngomphakathi wayo okhululayo, indawo enamagquma, ubuciko bokwakha abaseVictoria, ubuhle obumangalisayo, inkungu yasehlobo, nokwehlukahlukana okukhulu kobuzwe nokwamasiko. Lezi ngezinye nje zezici zedolobha elenza iSan Francisco yaba elinye lamadolobha avakashelwa kakhulu emhlabeni.
Izifunda zaseSan Francisco
Isango Legolide. Omakhelwane bemfashini nabaphezulu, isib, isifunda saseMarina, iCow Hollow, nePacific Heights, ngokubuka okubanzi nezimpawu zomlando - i-Fort Mason, i-Presidio, kanye nesithonjana seGolide Gate Bridge.
I-Fisherman's Wharf. Indawo yabakhenkethi ebheke izihambi ebandakanya i-Ghirardelli Square, i-Pier 39, kanye nesikebhe esiqala ukusebenza e-Alcatraz Island, kanye nenqwaba yezindawo zokudlela zasolwandle kanye nezitolo zezikhumbuzo.
I-Nob Hill-Russian Hill. Izindawo ezimbili ezingamasiko ezinamahhotela we-upscale, izimoto zamakhebula, ukubukwa kwephaneli nokuthambekela okucishe kube yindawo.
IChinatown-North Beach. Imiphakathi emibili ethuthekile yokufika; iChinatown egcwele futhi enkulu kakhulu ngaphandle kwe-Asia eduze kwesitayela esibuyiselwe emuva 'i-Little Italy', kanye ne-Telegraph Hill kanye neCoit tower.
Isifunda se-Union Square-Ezezimali. I-Union Square iyisikhungo sokuthenga, yaseshashalazini kanye nezobuciko edolobheni, eduze kwamabhisikidi amaningi edolobha naseMarket Street.
Isikhungo Somphakathi-Tenderloin. Isikhungo se-neoclassical Civic eduze komngcele weTenderloin. ISan Francisco Opera, iSan Francisco Symphony neSFjazz zitholakala lapho. Ngenkathi i-'Loin 'iqhelekile uma iqhathaniswa nedolobha lakhona eliyitilosi, kunobuningi bezakhiwo ezikhangayo nezihehayo ongazibona lapha.
ISoMa (iNingizimu yeMakethe). Indawo eshintsha ngokushesha yedolobha okuyisikhungo sokwakhiwa okusha okusha, kufaka phakathi ama-skyscrapers amasha, eminye iminyuziyamu yedolobha entsha, ne-AT & T Park, ikhaya leSan Francisco Giants.
Isengezo sase Ntshonalanga. Indawo eyingqophamlando enamakhaya amaningi amaVictoria eyayikade iyisiko lesiko lase-Afrika-laseMelika. Ngaphakathi kwendawo kukhona neJapantown, eyake yaba yisikhungo sabantu baseJapan baseSan Francisco, esinezindawo eziningi zokudla zamaJapan nezindawo zokudlela, kanye namahhotela anakekela izihambi zaseJapan.
Idume ngokuba yikhaya lomnyakazo weHippie, le ndawo eyake yaba yi-bohemian iseyingcebo ye-eclectic.
Ama-Avenues. Kubandakanya nenkungu yaseRichmond. Izifunda zeLanga kanye neParkside District, zihlukaniswe yi-Gold Gate Park ebukekayo, eboshwe entshonalanga yi-Ocean Beach naseningizimu yiSloat Blvd. Isifunda saseRichmond sisenyakatho neGolden Gate Park kanti iSunset iseningizimu yepaki. Ngokwengeziwe njalo uzokuzwa abantu bendawo bebhekisele kwiRichmond engaphakathi nengaphandle kanye nelanga langaphakathi nelangaphandle. Ukwehlukaniswa eRichmond yiPark Presidio naseSunset 19th Avenue.
I-Twin Peaks-Lake Merced. Ihlanganisa iningi laseningizimu-ntshonalanga yeSan Francisco, le ndawo iyikhaya lamagquma amade kakhulu eSan Francisco neChibi elikhulu iMerced Park, eliqukethe iSan Francisco Zoo.
ICasro-Noe Valley. Inemibala futhi ihlangana, iCastro (i-Eureka Valley) yaziwa ngomlando ngokuba yisizinda samasiko omphakathi wedolobha le-LGBTQ. Eduze kwaseNoee Valley kunikeza izindawo zokudlela ezinhle nezitolo emigwaqweni etholakalayo.
I-Mission-Bernal Heights. Le ndawo enemibala iyikhaya lomphakathi omkhulu waseSpanic kanye nezazi ezintsha zasemadolobheni, futhi iyisikhungo sempilo yasebusuku yaseSan Francisco. Kubavakashi abafisa ukusuka ezindleleni ezivakashile zokuvakasha futhi babambe ukunambitheka kwendawo, nansi indawo okufanele uhambe ngayo.
ENingizimu-mpumalanga yeSan Francisco. Indawo yokuhlala engenayo ephansi kakhulu, lesi sifunda siqukethe izindawo eziningi ezisondelene ne-bay-side, kanye namapaki amaningi amahle.
Ngaphambi kokuhlaliswa kwaseYurophu endaweni, iphenathi manje eliqukethe iSan Francisco yayisekhaya lesizwe sakwaYelamu, ababeyingxenye yeqembu elikhulu lezilimi ze-Ohlone elalisuka eningizimu lisuka eBay Area liya eBig Sur of California. Ngenxa yesimo sezulu esingesihle sikaSan Francisco, abahloli bamazwe bokuqala baseYurophu banqamula ngokuphelele iSango LeGolide kanye neSan Francisco Bay.
Indawo yokuqala yaseYurophu endaweni yaqalwa ngabaseSpain e1776 njengomphakathi wezenkolo ozungeze iMishini iSan Francisco de Asís, endaweni namuhla ebizwa ngokuthi iMission Dolores eSifundeni SaseMishini. Ngaphezu kwe-mission, kwakhiwa inqaba yamasosha eduze kweGolide LaseGolide: El Presidio.
ISan Francisco inesimo sezulu esipholile, esinebusika elipholile, elimanzi nehlobo elomile.
Isikhumulo sezindiza iSan Francisco International sitholakala cishe nge-16km eningizimu yedolobha siyisikhumulo sezindiza esikhulu samazwe omhlaba, esinye sezindawo ezinkulu emhlabeni futhi sinezindawo eziningi zokuhamba ezibandakanya izinhlobo ezahlukene zokudla neziphuzo, ezitolo, ezokugcina izimpahla, ezitolo ezinkulu zomphakathi, ezokwelashwa umtholampilo, kanye nosizo lwabahambi abalahlekile noma abaxakekile nezisebenzi zempi.
Lapho ekuseni kunenkungu, ungahle uthande ukuchitha amahora ambalwa komunye weminyuziyamu eyedolobha eyezingeni lomhlaba. IGolden Gate Park iyikhaya le-MH de Young Memorial Museum, eneqoqo lethusi elihle kakhulu lobuciko besikhathi samanje nabomdabu. Iqoqo lakudala lase-de Museum lase-Asia seligcinwe unomphela eMnyuziyamu wase-Asia Art eSan Francisco, oseCivic Center. Ngaphesheya kwe-de Young Museum kuneCalifornia Academy of Science Science, ebambe imibukiso eminingi yesayensi, kubandakanya i-aquarium, iplanethi, nomnyuziyamu womlando wemvelo.
Isigodlo saseCalifornia seLegion of Honor siseLincoln Park ekhoneni esenyakatho nentshonalanga yesifunda saseRichmond. ENob Hill, iMnyuziyamu yeCable Car Museum inikezela ngemibukiso ezindaweni ezihamba phambili ezidumile zaseSan Francisco. Eduze kweCastro kukhona iMnyuziyamu yaseRandall, umnyuziyamu omncane wezingane omncane. ISan Francisco Museum of Modern Art, iMoscone Center, iY) Buena Center for the Arts, Zeum, Cartoon Art Museum, Museum of the African Diaspora kanye neMnyuziyamu weCraft kanye ne-Folk Art konke kutholakala eSoMa, eningizimu ye-Union Isikwele. IContemporary Jewish Museum, eyaklanywa nguDaniel Libes mosa futhi yavulwa ngoJuni 2008, iyisengezo esikhulu sakamuva sendawo yemnyuziyamu yeSan Francisco.
EHyde Street Pier eFisherman's Wharf ungagibela imikhumbi eminingana yomlando, kufaka phakathi umkhumbi we-1886 Balclutha clipper, isikebhe esihamba ngezinyawo, isikebhe esinamandla, kanye ne-schooner yasogwini. EPier 45 nje empumalanga, kungavakashelwa impi yempi yempi yezwe II i-USS Pampanito kanye neMpi Yezwe Yesibili Yenkululeko Yezempi SS Jeremiah O'Brien. Eduze nase-Aquarium of the Bay kuPier 39 kanye neMamame Tussauds Wax Museum esanda kuvulwa. I-Musee Mecanique ku-pier 45 iqukethe amakhulukhulu emishini yemali esetshenzisiwe yokuzijabulisa, eminingi evela ngekhulu le-19th. Iningi lingasetshenziselwa ikota nje.
Indawo esanda kuthuthelwa futhi inkulu futhi ingcono kunangaphambili i-Exploratorium kuPier 15 ihamba ibanga ukusuka e-Embarcadero futhi izokugcina umatasa usuku lonke nemibukiso yabo yesayensi nokubona. Esifundeni saseMarina kukhona iFort Mason, okuyikhaya leminyuziyamu embalwa yesiko.
Iminyuziyamu eminingi inikeza ukuvuma mahhala ngezinsuku ezithile phakathi neviki lokuqala lenyanga.
ISan Francisco inamapaki amaningi, kusukela kumncane kuya kokukhulu. Okudume kakhulu kubo yiGolden Gate Park esifundeni sase-Avenues, okuyimayela elikhulu (elinganiselwa ku-1 / 2 mile-by-four mile) i-oasis yasemadolobheni enama-windmill, i-bison, iminyuziyamu, i-carousel nokunye okufihlekile phakathi kwezintelezi zayo. Lesi siqiwi siqukethe okudala okuluhlaza okugadliwe kwe-Conservatory of Flowers, ubuciko besimanjemanje kanye nobuzwe obugxile ku-De Museum, igumbi elikhulu leTiya laseJapan, isakhiwo esisha seCalifornia Academy of Science eklanywe nguRenzo Piano kanye ne-Strybing Arboretum, iqoqo lezitshalo ezivela kuwo wonke umhlaba opholile. Ukuchaza indawo esekude kakhulu yeNyakatho Ntshonalanga yedolobha yiLincoln Park eRichmond, enikezela ukubukwa okuhle kweMarin Headlands, iGolden Gate Bridge ohlangothini lolwandle, kanye nolwandle iPacific uqobo. Emaphethelweni asentshonalanga ngokwedlulele, iCliff House eyaziwayo inikela ngokudla nokuphuza okusemthethweni. Umnyuziyamu weLegion of Honor enkabeni yepaki uhlala nezithombe eziningi ezimangalisayo.
Eduze nendawo ephakathi nendawo yedolobha kukhona iTwin Peaks, enye yamaphuzu aphakeme kakhulu eSan Francisco (925 ′ ngenhla yolwandle); ukuhlinzeka ngokubuka okumangazayo kuzo zonke izinkomba. Amabhasi okuvakasha angakwazi ukuxhaswa lapha phakathi nosuku, kepha yindawo enhle yokwazisa ngempela leli dolobha kusuka phezulu, ikakhulukazi nangemva kokushona kwelanga. Izinga lokushisa laphaya lingaphansi kakhulu kunasemzini, ngakho-ke nilethe ijakhethi. Eduze kwendawo yeLake Merced yiSan Francisco Zoo, indawo ezondayo enkulu futhi enakekelwa kahle okuyindawo enhle ongahamba kuyo uma uhamba nezingane noma ukuthandwa kwama-penguins, ama-primates, amabhubesi noma ama-llamas.
Yize ingaziwa kahle ngamabhishi ayo, iSan Francisco inezimbalwa ezinhle phakathi koLwandlekazi iPacific - kodwa amanzi ayakhithika, imimoya ingaba namandla, futhi ngenxa yokugeleza okuqinile kokugelezela kunoma iyiphi yawo ayinconywa. I-Ocean Beach eduze kwesifunda se-Sunset iyi-beach enkulu kunazo zonke futhi eyaziwa kakhulu, enesihlabathi esiningi futhi abantu bayazijabulisa. I-China Beach eRichmond kanye ne-Baker Beach eGolden Gate imincane, kunamabhishi aseceleni anokubukwa okuhle.
Ngezinsuku eziba yilanga ama-hipsters athuthela eMission Dolores Park, aqanjwe ngenxa yendawo akuyo yomgwaqo ukusuka eMission Dolores Basilica. Ipaki ivame ukufana nephathi enkulu, ngomculo, ukubanda kobhiya kanye nokwelashwa kwensangu yezokwelapha. I-Mission Dolores Park itholakala emthambekeni omncane endaweni yaseNoo Valley, amabhlogo nje ambalwa ukusuka ezindaweni zokudlela eziningi nemigoqo eMishini. Uhlangothi olusempumalanga lwalesi siqiwi luboshwe iDolores Street, okuyigwala elinentaba nenhle eboshwe ngezihlahla zesundu namaVictorians. Ngesikhathi lomlilo we-1906 ucekele phansi idolobha eliningi, elinye lamagesi ambalwa asebenzayo abekade ekhona laphaya ngasekhoneni eliseNingizimu ntshonalanga yepaki. Le moto hydrant yanikeza amanzi asiza ukumisa umlilo. I-fire hydrant isasebenza futhi ilungiswa ngegolide kanye ngonyaka ngosuku lokuzamazama komhlaba kwe-1906.
Engxenyeni eseningizimu yedolobha kuvame ukunganakwa kepha okumangalisayo iBernal Heights Park, ipaki elincane eliphakeme egqumeni elibheke yonke ingxenye yempumalanga yedolobha, ngokubukwa okuhle kwe-skyscrapers esifundeni sezezimali, esifundeni saseMishini kanye amagquma ekhoneni elisempumalanga mpumalanga yedolobha. Ithrekhi ebanzi igijima izungeze isisekelo sepaki ngaphansi kwesiqongo esingahanjwa ngemizuzu elishumi kuya kweyishumi nanhlanu. IBernal Heights Park inobungani bezinja, kangangokuba i-coyote ijwayele ukubonwa lapho.
Enye yezindlela ezinhle zokubona iSan Francisco isuka emanzini eSan Francisco Bay. Kunezinkampani eziningi ezinikeza izinkambo zemikhumulo yezinsuku ezihlukene kanye namanani kodwa zonke zinikeza ukubukwa okumangalisayo kwe-bay, amabhuloho, isiqhingi sase-Alcatraz, i-Angel Island nedolobha. Ukuvakasha kwesiqhingi okuqondile kuphela okuvunyelwe ukufika e-Alcatraz, kepha uhambo olujwayelekile lwetheku luzungeza isiqhingi ngokuhamba kancane, okunikeze ithuba eliningi lokuthwebula isithombe sejele elingasebenzi manje emanzini.
Futhi cabanga ukuthatha isikebhe esivela eSan Francisco ngaphesheya kwechibi ukuya eTiburon, Sausalito, noma e-Alameda. Ukubukwa okufanayo kwengxenyana yentengo.
Uhambo oluningi lusuka emaqeleni eFisherman's Wharf eduzane nePier 39 (i-Pier 33 ye-Alcatraz). Amathikithi angathengwa ezikhumulweni zezindlu eceleni kwendawo ehamba amanzi. Thenga amathikithi ngosuku noma ezimbili ngaphambi kwenkathi ephezulu yehlobo. Ohambweni lwesiqhingi i-Alcatraz, kungadingeka ukuthi ubhukishe amasonto ngaphambi kwesikhathi (kepha ungathenga futhi amathikithi wohlu lokulinda - uma kunezikhala ezisele ongena kuzo, uma kungenjalo ubuyiselwa ngokuphelele). Kufanelekile-ke nokho - uthola uhambo oluningi lomsindo wejele, ngezindaba zokuzama ukweqa okuningana.
Izikebhe zivame ukushiya cishe njalo ngehora ziqala ukuzungeza i-10am futhi ziphela ngase-5pm. Imihlahlandlela yezilimi eziningi iyatholakala kwezinye izinkambo. Amanani aqala ku- $ 20- $ 40, ngaphezulu kokushona kwelanga, isidlo sakusihlwa noma izinkambo zokubuka i-whale.
Noma ngosuku olushisayo i-bay ingaba-chilly, ngakho-ke qiniseka ukuletha sweta kanye nesikrini selanga.
Ezinye izikebhe zinemigoqo esikebheni esikebheni, kodwa uze namanzi akho kanye nokuphatha ukugwema ukukhokha izindleko eziphakeme noma ukuhamba ngaphandle. Manje kunokudla okulinganiselwe kanye nesitolo sezikhumbuzo e-Alcatraz.
Umculo eSan Francisco
Imicimbi-imikhosi-amaholide eSan Francisco
Uma uyifuna, kungenzeka ukuthi ungayithola eSan Francisco. Kunemikhakha ehlukahlukene yamabhizinisi amancane nezinendawo yangakini kuyo yonke imigwaqo yedolobha; eqinisweni, iSan Francisco ingxenye enkulu yayo igxekele phambili ukuthuthukiswa kwabathengisi abakhulu bamaketanga nezitolo ezinkulu zamabhokisi ezivamile kulo lonke elaseMelika.
Uma ngabe amathokhethi abavakashi owafunayo, iFisherman's Wharf inesikhumbuzo esijwayelekile, ihembe, nezitolo zekhamera, kanye nezitolo eziningi ezikhethekile. Kodwa-ke, indawo yezitolo ethandwa kakhulu eSan Francisco yi-Union Square, enazo zonke izitolo ezinkulu zeminyango kazwelonke (iMacy's, Saks, Nordstrom, njll.) Kanye nenqwaba yezitolo ezinhle kakhulu zasesitolo, kanye nezindawo ezimbalwa zokuthenga ezifakwa phakathi.
Amabhokisi amancane, aphezulu e-upscale, i-Union Street, iHayes Street ezungeze i-Octavia, iFillmore Street ezungeze iCalifornia Street, kanye neChestnut Street endaweni yeGolden Gate zinomugqa wezindawo eziyingqayizivele nezinesizotha, futhi yonke le migwaqo iphakathi kwezindawo ezinhle kakhulu kuleli dolobha ukuya efasiteleni shop and nash. INob Hill nayo igcwele izindawo ezikhethekile.
Kepha uma ungenalo i-dollar elibizayo ongalisebenzisa futhi usafuna ukuhamba ngento eyingqayizivele, kukhona izitolo eziningi eChinatown, zithengisa imisebenzi yezandla yaseMpumalanga yazo zonke izincazelo, futhi azikho izitolo zokugcina. IJapantown futhi inikezela ngezitolo eziningi ezinhle ezithengisa izikhumbuzo eziyiqiniso, kufaka phakathi iKinokuniya Stationery / i-Bookstore enhle kakhulu. IHaight igcwele amarekhodi azimele amahle nezitolo zezincwadi, ne-Amoeba Music ebusa lesi sehlakalo.
Ngokuthola okuyisisekelo, zama izitolo ezisebenzisekayo ze-XiUMX-Eleven kanye namakhemisi amaWalgreens. Uma udinga ukudla okuthengiswayo, iSafeway yindawo ethengisa izinto ezinkulu edolobheni. Kunezitolo zeSafeway eSoMa, eduze kwaseFisherman's Wharf, kanye naseFineral District, kodwa hhayi eduze kwe-Union Square. Isitolo esiseduzane kakhulu e-Union Square yisuphamakethe ephezulu yeBristol Farms eWestfield San San Shopping Shopping Centre.
Ukuthi udlani futhi uphuze eSan Francisco
ISan Francisco iyaziqhenya ngokwanda kwayo kokwehlukahlukana ngokobuzwe, ubulili, ukunakwa kocansi nesitayela somuntu siqu. Lo mkhakha ubhekwa kabanzi njengenye yezimpawu zedolobha, futhi udonsela zombili izivakashi nokufakelwa ngokufanayo.
Ababhemayo qaphela: njengakuyo yonke iCalifornia, ukubhema akukho emthethweni emishayo, ezindaweni zokudlela nakwezinye izindawo zomphakathi. Abantu be-Bay Area bangaba namazwi ngokukhethekile ngemikhuba yakho yangasese. Qaphela izindawo ezingabhemi, futhi uzame ukuba nomoya omuhle ngokubhema kwezinye izindawo. Ngeke bakuhluphe ngokuma nokubhema ngaphandle kwendawo yokudlela noma ibha.
Amabhasikidi angaqashwa ngokuqhamuka ngasogwini oluseNyakatho lwamanzi (iPier 41 / Fisherman's Wharf / Aquatic Park area) noma eduze naseGolden Gate Park uma kuyiwe eMarin County ngeGolden Bridge Bridge. IStanyan ngaseHaight ekugcineni kwepaki kunezitolo eziningi ezinhle. IGolden Gate Transit isebenza futhi iNorth Bay ukusuka eSan Francisco, futhi inama-bike racks emabhasini amaningi.
Izindawo eziseduze neSan Francisco ohambweni losuku.